Olee otú Idozi a Wet iPhone na dara na mmiri
My iPhone dara na mmiri na m na-niile bibiri ugbu a! ... mgbe nụrụ onye cribbing na mkpesa nke ihe dị ka nke a? Ma eleghị anya, i nwere ma wee otú ewere ọsọ ọsọ gbalaga na ị bụ clueless banyere otú obibi ya. A mmiri na-mebiri emebi ngwaọrụ mkpa ilekọta nlezianya na ọ bụrụ na unu bụ n'ezie ndị nkọ na salvaging gị ịna iPhone, na-agbalị na idozi ya onwe gị n'ihu na-eme ụzọ arụzi.
Ka ọ bụla ọzọ kọmputa ngwaọrụ, iPhone chere ihu nwere mmebi mgbe na-abịa na kọntaktị na ọ bụla mmiri mmiri. Ma iche na ọ bụ mmiri pụtara ndụ ya na-arahụ ruo mgbe ebighị ebi na-apụghị natara bụ ihe ọjọọ kwa. Ọ bụrụ na ị ama esịn gị iPhone ke okpokoro ịwụ ma ọ bụ osimiri ka ọ bụ oké osimiri ma ọ bụla ọzọ mmiri ahu, oge na-arụ isi ọrụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, na-agbalị na-azụ ekwentị gị dị ka ngwa ngwa dị ka o kwere mere na mmebi nwere ike minimized. Idebe ekwentị gị na na ọnọdụ ga nanị na-emebi ya mmekwata. Ị nwere ike soro ntuziaka ka tọrọ ala n'okpuru.
Gịnị na-eme na mbụ na a mmiri iPhone?
N'agbanyeghị nke mere mpu dapụtara na gị iPhone ese nsogbu n'ihi na ị, chee echiche nke ọma otú ị ga-awagide ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị na-enweghị mkpuchi, ihe kasị mma bụ ka ịgbanwee gbanyụọ ekwentị, gbanwee ya ala na a akọrọ ákwà ma na-eme ma nke ndị a:
• etinye iPhone na a tub ma ọ bụ a akpa nke uncooked osikapa ka ọ na-anọdụ awa ole na ole.
• Buru ekwentị na a plastic akpa nwere ole na ole silica ngwugwu
• Tinye ya na a enyemaka ịnụ ntị draya maka minit ole na ole
Isi ihe banyere ndị a ụzọ bụ na-ngafe mmiri si nke ekwentị. Air-ihicha unit dị ka nhọrọ na-anakwere ma ọ ga-abụ ngwa ngwa dị ka ndị n'elu kwuru banyere omume. Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye ọ bụla nke gị mgbalị na-agba ihe ọ bụla ziri ezi, ihe Apple ụlọ ahịa bụ ebe ị kwesịrị isi.
Otú ndozi a mmiri iPhone?
Ozugbo ị matara ihe otú obibi mmiri gị emetụta iPhone, ndị ọzọ ihe na ị ga-echegbu onwe anyị banyere na-gwara ya kpam kpam nke na ọ na e weghachiri eweghachi na steeti ya ozugbo bụ.
• Olee ụdị mbipụta eme kasị na-iPhone na dara na mmiri?
Kacha doro anya ihe na-eme na gị iPhone mgbe ọ nọwo na kọntaktị na mmiri bụ nkwarụ. A nwere nkwarụ ekwentị gaghị ekwe omume iji, nyere otu emebeghị ka ọ bụla iji na-eme ihe bara uru banyere ya. Mgbe ụfọdụ, i nwere ike ịgbanwee na ekwentị ma logo kpamkpam kpam kpam emitting a ide ọcha ma ọ bụ a mkpa red akara nke na-egosi ya oké mkpa maka ịrụzi.
• Olee otú idozi ya dị iche iche ọnọdụ?
Ọ bụ ezie na ihe ole na ole e kwuru, ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ obibia:
Nzọụkwụ 1: nweta ekwentị si na mmiri pụta ngwa ngwa iji gbochie n'ihu mmebi
Nzọụkwụ 2: Mgbe mmiri mebiri emebi iPhone a na-etinye si na mmiri pụta, ịgbanwee ya anya mbụ mere na ọ dịghị ekwe omume nke a obere sekit na-ebilite ga-awụnye iPhone-abaghị uru.
Nzọụkwụ 3: Wepụ ekwentị ikpe ma ọ bụ cover, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, iji gbochie mmiri seeping na. Wepụ kaadị SIM gị na ọkpọọ na a akwụkwọ towel.
Nzọụkwụ 4: Were ụfọdụ akwụkwọ akwa nhicha ma ọ bụ dị ọcha ákwà wepụ mmiri si iPhone. Hichaa ọdụ ụgbọ mmiri na sockets gị iPhone enye ya a nwayọọ shake.
Nzọụkwụ 5: Nọgidenụ na-iPhone na airtight plastic akpa gbara gburugburu ole na ole silica jel ngwugwu dị ka ha bụ mmiri-absorbent. Alternatively, dị ka mesiri na mbụ, a akpa nke uncooked osikapa bụkwa ezi nhọrọ.
Nzọụkwụ 6: Ọ bụrụ na unu bụ n'ezie ndị obi ike banyere-eme DIY Ndozi na iPhone, ihe kasị eme ka ọ bụla mmiri ekwentị ga-iwesasi ala kposara na ego maka interiors. Mgbe ọ bụ eziokwu mgbe nile na-na-mmiri si n'ime ga-enyere ya aka nkụ ala, karịsịa nke ị wepụ batrị ma hichapụ ọcha, ma na-elekọta ịlụ ya rụziri Kama ime ka ndị ọzọ emebi ya.
Nzọụkwụ 7: Dị ka a dochie anya, i nwere ike na ụfọdụ mmiri na-eguzogide ọgwụ ikpe ma ọ bụ na-ekpuchi njikere.
Nzọụkwụ 8: Nọgidenụ na ekwentị gị na-ekpo ọkụ ebe banyere 48 awa ma ọ bụ otú nkụ. I nwere ike ile anya na ya ma na-amata ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ọzọ ihicha ma ọ bụ oge bụ ezuru.
Nzọụkwụ 9: Unu eme ka mmeghe nke odori ekwentị gị nke na-esote awa 72. Nke a bụ ihe dị oké mkpa akpachara anya maka ihe niile mmiri mebiri emebi ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 10: bụrụ na ihe niile dị mma, na-agbalị na-atụgharị gị iPhone aka.
All na anyị nwere ike na-atụ anya ya bụ na ọ na-abịa azụ akpasarade avatar.
Common iPhone odori nsogbu na ngwọta
Otú nyefee Ndi ana-akpo, SMS, Music na Ọzọ si Samsung ka iPhone
> Resource> iPhone> otú ndozi a Wet iPhone na dara na mmiri